“Waxaan ku hor dhibtoonnay kooxda Borussia Dortmund” – Ernesto Valverde – Gool FM
(Yurub) 18 Sebt 2019. Tababaraha Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa qirtay in kooxdiisa ay dhibaato badan ka soo gaartay intii uu socday kulankii xalay ay kula ciyaareen Borussia Dortmund tartanka Champions League.
Kooxaha Borussia Dortmund iyo Barcelona ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Signal Iduna Park, kulankooda furitaanka wareega group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 0-0 ah.
Ernesto Valverde ayaa kaddib ciyaarta wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Wax badan ayaan dhibtoonay, taasi waa inaan ogaanaa, waxaan ka war qabnay inaan dhibaato la kulmi doono, inkastoo Borussia Dortmund aysan ku bilaaban ciyaarta si xoogan, laakiin waxay noogu hanjabeen fursado halis ah”.
“Aad ayey gurigooda ugu xoogan yihiin, waxaan xakameenay ciyaarta laakiin waxaan galnay halis badan ee waqtiyo badan ah, waa kuwo xoogan ee dhaqsi badan, waxay halis nagu galiyeen 3 ama 4 fursadood, waxayna nagu abuureen dhibaato badan”.
“Mar labaad ayaan xakameenay ciyaarta, balse ma jirin wax fursado ah ee aan sameynay Ter Stegen aad ayuu u fiicnaa, taasina waxay ahayd nasiibkeena wanaagsan”.
“Waa inaan horumar sameyno, waxaana dooneynaa inaan kubadda heysano kulamada aan ciyaareyno, laakiin taas kuma hor sameynin kooxda Borussia Dortmund, sidoo kale dhaawaca soo gaaray Jordi Alba bilowgii ciyaarta ayaa na saameysay”.
“Lionel Messi wuxuu sameeyay wax ku filan, muddo dheer ma uusan sameynin wax tababar ah, wuxuuna ciyaaray diyaargarow la’aan, sidoo kale wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyay toos ah uu ciyaaray Luis Suarez, waxaan u baahanahay inaan horumar sameyno waqtiyada soo socda”.